Dib-u-hagaajin maaha qalablaha 'indexer' oo weli ku haboon isticmaalka hadda?
Wali miyaad weli yaaban tahay in qalablaha 'indexlink tooler' ay ku habboon yihiin hadda, ama ma'aha? Jawaabta fudud waxay tahay - haa, waxay yihiin. Iyo waxaa jira sababo badan oo dib loogu xaqiijiyo taas - in la helo taxadar habboon waa in ay ahaato WAXA BARNAAMIJYADA kasta. Ugu yaraan sababtoo ah guud ahaan lagu qiimeeyay White-Hat SEO, waxay yihiin kuwa dhab ahaantii jaban. Sidaas awgeed, aynu wajahno - backlink adeegyada adeegsadaha 'backlink services' waxay sii hayaan awoodda asalka ah ee sannadka 2017, waxaana la filayaa saamiyada libaax ee khubarada SEO-yada inay sii wanaajiyaan mudnaanta mustaqbalka. Taasi waa sababta hoosta aan u socdo si kooban oo kooban oo ku saabsan talooyinka ugu macquulsan ee ku saabsan xayiraadyada ganacsiga maxaliga ah, wargeysyada jaraa'idka, shabakadaha isku-xirnaanta, iyo fikradda "SEO negative" oo ku boorinaysa khadka gadaal-qabka ee hadda taagan.
Ganacsiga Ganacsiga ee Deegaanka
Ka hor intaan wax kale jirin, xaalladaha ganacsiga maxaliga ah waa inaan marnaba la dayicin, gaar ahaan inta badan mashaariicda internetka ee gobolada ama ganacsiyada yaryar.Sababtoo ah xitaa sharci buuxa oo awood sharci ah oo aan awood u lahayn inay u galaan Google gaaban ogaysiiska gaaban. Waa maxay sababta? Dhibaatadu waxay tahay in qaybta libaax ee sharaxaadda mawduucyada la xidhiidha badanaa loo isticmaalo qoraallada si joogta ah. Maxay tahay sababta aadan u qaadin faa'iido macquul ah oo ku aadan tartamayaasha kugu dhow oo aad hogaamiso? Sidaa darteed, qalablaha 'indexlinder' waa qalab isticmaalaya ugu yaraan sababtoo ah website-kaagu wuxuu u baahan yahay xaashiyo badan oo la soo dhejiyey, iyada oo aan midkoodna ka muuqan mashiinnada raadinta.
Waxyaalaha ayaa ah in qiyaastii xiriir kasta oo ka baxsan war-baahinta saxaafaddu ay tahay mid cambaareyn kaliya, ama dhab ahaan. Waa maxay sababta? Si fudud sababtoo ah mashiinnada raadinta waaweyn ee sida Google ah laftiisa ayaa og in qofna uu bixin karo silsilad duug ah oo warbaahin ah. Natiijo ahaan, si fudud ayaad u heli kartaa boqolkakaal oo dib u celin ah oo ku saabsan warbaahinta madaxbannaan ama bogagga wararka. Si kastaba ha ahaatee, kaliya hal ama laba ka mid ah ayaa loo badinayaa in lagu soo qoro liiska Google ee SERPs. Oo halkan waa xalkaaga - natiijooyinka celceliska ee kuwa dib loo soo celiyey waxay noqon karaan kuwo aad u wanaagsan marka la qabanaayo qalabyada taxanaha ah sida backlink Links Indexer, iyo sidoo kale Backlinks Indexer. Waxaan labadoodaba isku dayay, sidaas awgeed waa adiga kaliya oo keliya inaad go'aansato midka uu doorto. Nasiib xumo, waxay qaadan kartaa waqti aad u badan Google iyo mashiinnada kale ee raadinta si loo ogaado wixii backlinks ah ee dhawaan la abuuray xitaa shabakadaha hogaaminta, sida Tumblr, Blogger, iwm.Taasi waa sababta aan u aaminsanahay in adeegyadda indexlink backlink ay yihiin kuwo waxtar leh. Ka dib, waxtarka suuq-geynta dhabta ah ee haysta ilahan waa in ay ka mid noqdaan danahaaga ugu weyn, sax?
Waa xaalad aad uwanaagsan marka mid ka mid ah tartamayaashu ay soo rogaan boggaga oo dhan oo uu leeyahay khibradiisa guuleysta. Waxaan loola jeedaa in mid si sahlan u isticmaali karto qoraallada gaarka ah si aad u daabacdo sida bogga xayawaanka ah meelo kale oo leh PageRank sare, ama maamulka domain. Habkaasi, waxay u egtahay in website-kaagu uu kaliya qeexay nuxurka bogga oo dhan, halkii uu noqon lahaa kooxda dhabta ah ee waxyeello gaartay. Taasi waa sababta aad mar walba u fiicnaan lahayd boggagaaga oo dhan in ay ka dhakhso badan yihiin kuwa guurka ah ee aan waxba galabsan oo u dhaqma sida copycats oo kaliya inay xadaan qayb ka mid ah shaqadaada adag. Ugu dambeyntii, saameynta mustaqbalka ee "negative SEO" waa inay noqoto ugu dambeyntii ugu qanacsan tahay in la yiraahdo markale mar kale - qaadashada daryeelka si loo xakameeyo dadaalka saxda ah ee taxadiyada indexlink weli waa WAA IN AAD HALIS Source .